Iingcebiso eBerlin - eJamani - izinto ze-10 - 1aviagem.com
Iingcebiso ngeBerlin-Germany - iindawo ezili-10
Isithuba esingaphambili: Ungazifaka njani iimpahla ngaphandle kwesinyithi
Isithuba esilandelayo: Intaba-mlilo kunye nommangaliso kuhambo lokuqala lokuya eChile
Ithunyelwe 7 March 2019 yi Rômulo Lucena
Yintoni esinokuyilindela eBerlin, inkulu yeJamani? Ezi ngcebiso zikhona nabani na owenza uhambo lwabo lokuqala.
Ukuba kukho enye into yokuba iBerlin inendawo yembali yokutyelela. Ininzi yayo inexabiso lembali, ukusuka eludongeni, oludumile emhlabeni, iBurlin Wall; kwiintlanganiso zesikhungo, izitrato, iipaki, izikwere, amasango kunye nezibane zendlela! Ngamafutshane, isixeko siphefumlela imbali, kuba bekuyiyona nto iqhutywe kuyo imicimbi yeemfazwe zehlabathi zokuqala neyesibini. Inyaniso iyatshelwa, iBerlin ishintshe imbali yobuntu emhlabeni wonke kwaye ixanduva lokuguqulwa kwezentlalo, inkcubeko kunye nezoqoqosho, de kube sifike kwimpucuko njengoko siyazi namhlanje.
Ngoko hlalani apho kwaye sinokucebisana malunga noko u tyelele kwindlela yokuqala yokuya eBerlin.
Yintoni oya kutyelela?
Ndiza kuzama ukufutshane kunye nokwenza uluhlu oluphezulu lwe-10 yento yokuya kuyo kwisixeko.
1- Uronga lwaseBerlin
Ndicinga ukuba le nto ingundoqo, enyanzelekileyo nabani na oya eBerlin.
Kwaye kutheni? Kuyo yonke intsingiselo kunye nembali azisa nayo. Udonga lwalo luhlobo olugqithiseleyo lolwahlulo lwehlabathi phakathi kobuqabane kunye nentlalo. Ibali lakhe libonisa indlela abantu abangenza ngayo izinto ezintle, eziyingqayizivele ngaphandle kokulinganisa imiphumo. Kananjalo nokuba kutheni abantu kufuneka balandele ngokufutshane isenzo sabathetheli kwaye kungekhona nje ukulandela ngokulandelelana imiyalelo enikwe.
Ukuwa Berlin Wall e 1989 ibonisa nobuyiselo isixeko Jamani, Ukuhlangana izalamane kunye nokoyisa ixesha emnyama, babehlala kulo lonke ihlabathi. Ndingatsho bekuya kuba ilingane ukuphela kocalucalulo eMzantsi Afrika.
Phakathi kweengcambu zeBall yaseBerlin ndizalelwe ubomi. Ithemba ngekamva.
I-2- Checkpoint Charlie
Kwakuyindawo yomkhosi eyayilinde umda phakathi kweNtshona kunye neMpuma yeBerlin ngelixa udonga lwalukho kwaye isixeko sahlula. Kwinqanaba ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye leSixeko. Kwaye ndayigxininisa loo mzi kuba asinakuthetha ngokulawula umda phakathi kwamazwe, kodwa ngaphakathi kweso sixeko. Oku kunzima kakhulu. Khawucinge uvuke ngelinye ilanga kwaye ungabi nako ukutyelela intsapho yakho, okanye ngabahlobo bakho, ngenxa yokuba bangaphesheya kwedolophu?
Ewe, yonke imimiselo ineemeko zayo kwaye kule meko kwakungafani. Kwi-checkpoint uCharlie ungadlula ngaphesheya kweBerlin ukuya kwelinye. Kodwa, kufuneka ube ilungu lamaQumrhu oLuntu okanye i-diplomate yangaphandle. Kwaye ngokugqithiseleyo kudluliselwa.
Kule mihla, enye yeendawo kunye nezihlwele ezininzi ezikhenketho. Wonke umntu ufuna ukuthatha umfanekiso wendlu kunye nomqondiso odumile esithi "Usukela kwicandelo laseMerika"! Ushiya kwicandelo laseMerika.
3- Alexanderplatz kunye neTable Tower
Ibona elikhulu, lixakekile kwisikwele saseBerlin. Kukho esinye sezikhululo ezisisitalathweni ezisisitratweni salo sixeko. Phinda udlule imigca emininzi, ngaphandle kokuba ube yindawo enezinto zokuthenga.
A Umbhola weTV (I-Fernsehturm) ekululekileyo iyi-mkhulu, ineemitha ze-368 kwaye isakhiwo esikhulu kunazo zonke eBerlin. Yinkangala yokusasazwa. Ukongezelela kunendawo yokutyela ye-panoramic ngombono weesigidi ze-360 ezivela kwisixeko. Kuye kuguquke, ngoko unokubona isixeko ngaphandle kokuvuka esihlalweni! (Iphepha elipheleleyo lihlala malunga nemizuzu ye-30).
Kwinqanaba leTV e-Alexanderplatz
Kwaye kutheni inqaba yembali?
Nenqaba TV kufuneka isakhiwo edulusele ngaphandle zonke yaye imele ngokoyisa socialism phezu ongxowankulu. Uluvo apha kukuba sphere TV Tower akhumbule satellite eSoviet-zwi (i isathelayithi yokuqala eyayithunyelwe ngempumelelo emajukujukwini) kwaye kufuneka ezinombala obomvu, umbala socialism. Nangona kunjalo umakhi Bruno Flierl wabonisa ukuba umbala sisinyithi ubonisa ukufana kakhulu ye-zwi yisathelayithi, emele noludumileyo uzobe olwenziwe kumazwe yali.
Uyilo lukaHermann Henselmann noJörg Streitparth, kunye negalelo labanye abakhi abafana noFritz Dieter, Günter Franke, Werner Ahrendt Walter Herzog noHeinz Aust.
4- Gateenburg Gate
Isango elikhulu laseBrandenburg lalingenye yamasango anikezela ukufikelela eBerlin xa eso sixeko sasisincinane kwaye sijikelezwe udonga, uhlobo lwenqaba. Namhlanje mhlawumbi iposikhadi edume kakhulu eBerlin. Isango laseBrandenburg lisendaweni yasePariser Platz kwisithili esiphakathi.
5- City Park okanye iTergergen
Oku kuya kufana ne "Central Park" eNew York okanye "iParque da Cidade eBrasília". Kufanelekile ukutyelelwa kwabo bafuna ukuthatha ikhefu kwaye baphefumle umoya omtsha phakathi kwezakhiwo ezininzi zembali kwisixeko saseBerlin.
6- Isikhululo seGhost - "iGhost Station"
Bambalwa abantu bayazi kodwa kukho isiteshi sesitimela se-phantom eBerlin. Ayikho imoto engaphantsi komhlaba, akukho bhobho okanye ukuhla. Yaye, hayi. (Okanye ubuncinane kungekhona ukuba ndiyazi). Kodwa ukwenzela ukuba ungaphumeli umgaqo-mlando.
Yisitishi esinqanaweni esasisitokweni esilondolozwe ukususela kwiMfazwe Yehlabathi II kwaye ukususela ekwakhiweni kweWall Wall. Ngendlela yomzila ongaphantsi komhlaba abantu abadlulayo bevela e-East Berlin ukuya eNtshona Berlin. Le ngcamango yayilula. Kuba kwakungenakwenzeka ukuwela, kuba kwakukho udonga olulindile lwahlula isixeko. Emva koko sihamba ngaphantsi, sisebenzisa inzuzo yomzila ongaphantsi komzila.
Kwaye kwenzeka ntoni na?
URhulumente wafumanisa ukuba abantu benza lo mnqamlezo (owaphula umthetho ngexesha) waza wagqiba ekubeni avimbele ivesi. Ingxaki kukuba bavimbile zombini iphela ngokukhawuleza kwaye abazange bafune ukuba ngubani ophantsi apho. Akufuneki ukuthetha, abantu abaningana bafela apho xa bezama ukuya ngaphesheya. Yingakho ibizwa ngokuba sisikhululo somoya. Ngenxa yabantu abangcwatyelwe khona. Kwaye kwagcinwa ukuba igcinwe kwimbali edabukisayo yesahlulo saseBerlin, kuya kufana nesigxina sehlabathi. Nangona ukubuyiselwa kuqhubeka kunye noyilo lwe-1960, kunokwenzeka ukubona iifowuni kunye neetoni zexesha njengoko zazingekho xa zithe zaphela. Ngoko akukho izitimela zangasese ezisedlula.
7- Hitler Bunker okanye uFührerbunker
Enye indawo efunekayo ukuba uya kuba yiFührerbunker.
Yayiyindawo apho uHitler ayebuthela khona ingqungquthela kaRhulumente wakhe kwaye waceba izicwangciso zakhe zemfazwe.
Lo bunker wawuyimitha engama-5 ephantsi ukusuka emhlabathini kwaye ibe neemitha ezili-4 zekhonkrithi ukuyiqokelela. Le ngcamango iya kukhuselwa kwisiteyimu se-air. (Sithetha ngesimo seemfazwe yesibili sikhumbula?).
Kulapho umzimba kaHitler ufunyanwe ufile. Kuthiwa wacela amasoldati ukuba ambulale, kuba, xa ebona ukuba urhulumente wakhe uya kugqitywa ngenxa yokungena kwakhe kunye nendawo yokuhlala yi-Allied forces, wayesazi ukuba uya kubulawa. Emva koko kwengqondo yakhe yokugula bekuya kuba yinto efanelekileyo ukubulawa yiNazi ngaphezu kokubulawa ngumtshutshiso. Ekubeni kungekho mntu wayenenkalipho, wagqiba ukuzibulala kangangokuthi akayi kululeka kwiimpi ezihlasela.
Ngenxa yokubaluleka kwembali yale ndawo kunye nomthwalo owuzisayo, igermany entsha igqibe ekubeni kungangcono idilize le ndlu yokwakha isikwere ngaphezulu kwayo. Le yayiyindlela yokuzisa intsingiselo entsha kunye nokubuyisela indawo eluntwini. I-Bunker inokubonwa nakwifilimu ethi "Ukuwa, iiyure zokugqibela zikaHitler"
Indawo kaHitler bunker
8- IPalamente yaseJamani okanye iReichstag
Inqaba yaseReichstag (akuyiyo i-hashtag ok ?! LOL 😂😂 des) ifanelekile ukutyelelwa ngokuba yindawo apho yonke imbali yobudlova bukaHitler nobudlova kwaqala. Kwakukho umlilo kwi-dome, mhlawumbi ebangelwa ngumgqugquzeli wama-communist, obanjwe ngelo xesha. UAdolf Hitler, owayenguKhansela waseJamani ngelo xesha, wasebenzisa le meko kwaye wakhuthaza kumongameli (owamkela ngokukhawuleza) ukwenza umyalelo weReichstag. Lo myalelo ususile ininzi yamalungelo abantu abantu. Kwaye kwaqala intetho yamaNazi. Kwakuvela apho ukuba ezinye iindwendwe zanikwa, njengokwakhiwa kweBell Berlin. Ungalibali ukutyelela idome.
Isikhumbuzo se-9- Holocaust Memorial
Esi sikhumbuzo, esakhiwe ngeebhloko ze-2.711 zekhonkco eziphakamileyo ezahlukeneyo kunye nomhlaba ongalingani ufuna ukuzisa isivakalisi ukuba kuvezwe ukuphazamiseka, ukwesaba nokuhamba nzima. Yiyiphi eyenzeka kumaYuda ngombuso kaHitler. Kukho igumbi elinika ulwazi oluninzi malunga nesikhumbuzo namaYuda.
Ukuphela kwesikhumbuzo se holoscausto
10- Gcina iimpawu zendlela (Ampelmann)
Njengoko ndathi ekuqaleni kwesi sithuba, yonke into eBerlin yimbali! Nokuba ukukhanya kuthwala okuncane.
I-Ampelmann, okanye ngesiJamani, Ampelmännchen, - lolona phawu lwenkolo uza kulubona eBerlin. Ungunodoli owahlukileyo kwiirobhothi.
Kutheni i-Ampelmann ibalulekile?
Iphawula i-East Berlin, eli simboli linokunika ingcamango yokuba uhlalaphi kwisixeko. Ekwintshona-ntshona izibane zendlela zatshintshwa zibe yimiqathango eqhelekileyo.
Ukongezelela kwaveliswa ngu-psychologist, umdwebi, umqambi konke oku kunye kunye nomntu omnye. Umfazi wakhe walandela ukuphuhliswa kwesimboli kwaye wamnika inkxaso eninzi ngexesha lokudalwa kwezinto namhlanje eziza kubakho uphawu olukhulu kunentsapho.
UKarl Peglau wadala u-Ampelmann ukuba abe "mhle kwaye asebenze". Oopopu babini (bokumisa kunye nokuqhubela phambili kwabahamba ngeenyawo) bayilelwe ukuphucula indawo ebonakalayo yabantu abanombono ophantsi. I-Hat, ngaphandle kokumakisha isimbo sexesha, ikwasebenza ukuphucula umbono wokuhamba. NgokukaKarl Peglau: "indawo enkulu, kokukhona kukhanya ngakumbi, kokukhona kubonakala ngcono".
Ukongeza, okukhona "uthandeka" unodoli, isibheno esingcono seengqondo kuya kubakho kubantu ukuba bajonge irobhothi.
Akukho mqondiso wesibane sombane kwilizwe lalinokuphuhliswa ngokucophelela phantsi kwezinto zobugcisa nezengqondo njenge-East Ampelmännchen. Ubomi bomdali wayo budibene neBerlin.
Apha siqedela iinqophiso zethu zokuhamba eBerlin. Kwaye unayo enye inqaku? Naliphi na indawo emele ibe kuloluhlu?
Yishiye apho kwiinkcazo. Yaye ukuba uthanda, ungakulibali ukuzonwabisa kwaye wabelane.
Kude kulandelayo 😎!
AFRIKA ASIA EYUROPHU MANTLAAMERICA IOCEANIA SINGENYEAMERICA
Njani Alemanha Berlim Njani uhambo lokuqala
Cofa ukuze wabelane kwi Whatsapp (ivula kwi window entsha)
Cofa ukuze wabelane kwi Reddit (ivula kwi window entsha)
Cofa ukuze wabelane kwi-LinkedIn (ivula kwi window entsha)
Cofa ukuze wabelane kwi kwipokothi (Ivula kwi window entsha)
Nqakraza ukwabelana incwadi (ivula kwi window entsha)
Cofa ukuze wabelane kwi Tumblr (ivula kwi window entsha)
Nqakraza kwi e-mail kumhlobo (ivula kwi window entsha)
sibe Iyalayisha ...
Rômulo Lucena	Jonga konke →
Yabelana ngamava okuhamba, uze neenkcubeko kunye nembali ukuze wenze uhambo lwakho lube seluxolweni ngakumbi.
Senza uhambo lokuqala kwaye uza nathi.
Shiya lakho izimvo apha	Khansela impendulo
Dibanisa 139 nezinye ababhalisele
Ndandwendwela amazwe e-36 United Nations (17.61%) kwi-193.
Thumela ukuba oendereço imeyile Lakho Igama Yakho ye-imeyile rhoxisa
Post ayithunyelwe - khangela iidilesi imeyili yakho!
check Email akuphumelelanga, uzame kwakhona
Uxolo, blog yakho awukwazi onaye nge email.
%d Blogger like lo: